Ngathi-Qingdao Ole Pet Food Co, Ltd.
Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd. yasekwa ngoJuni ka-2011.
Siyinkampani ebanzi yokudibanisa i-R & D, imveliso kunye nentengiso ye ukutya kwezilwanyana zasekhaya.
Ukuthembela kwisiseko seqebengwane lesilwanyana sasekhaya iQingdao kwaye nangaphezulu kweminyaka elishumi yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, u-Ole uvelise waba ngumenzi owaziwayo wokutya izilwanyana zasekhaya; iimveliso zayo zithengisa kakuhle eYurophu, eMelika, mpuma Asia nakwamanye amazwe.
Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd. izinikele ekuboneleleni ngokutya okusempilweni nokukhuselekileyo kwizilwanyana ezixabisekileyo. Sakhe umasifundisane ococekileyo okwinqanaba le-100,000.00 ngokusekwe kubuchwephesha bemveliso yokutya kwezilwanyana esekwe eYurophu ene-200 MT / inyanga yemveliso.
Umgangatho kunye nokuyila sisiseko sophuhliso lwethu. U-Ole wenza imigaqo engqongqo yolawulo lweemveliso ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezilungileyo. Uyilo nolwakhiwo lomzi mveliso wokutya kwezilwanyana zasekhaya kuthobela ngokupheleleyo imigangatho yokutya eTshayina kumazwe angaphandle, kananjalo ngokuhambelana nenkqubo yokhuseleko lokutya ye-HACCP. Okwangoku, sifumene i-BRC, i-FDA, i-CFIA, i-HALA kunye nezinye izatifikethi, eziya kuthi zihlangabezane ngokupheleleyo neemfuno zokuthumela kumanye amazwe kwimimandla emikhulu yamanye amazwe.
Sizinikezele ekukhonzeni izilwanyana zasekhaya kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu. Inkampani iya kunika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zethu, yonyuse iinzame zeR & D, kwaye izabalazele ukuba yinkokeli ephezulu kushishino lokutya kwezilwanyana.